Global Voices teny Malagasy · 4 Avrily 2013
04 Avrily 2013
Tantara tamin'ny 04 Avrily 2013
Eoropa Andrefana04 Avrily 2013
Korea Atsimo sy Avaratra Anatin'ny ‘Tany Miady’
Amerika Avaratra04 Avrily 2013
Manana tantara lavabe momba ny fomba fiteny tia ady sy tia mandrahona an'i Korea Atsimo sy ny mpiara-dia aminy i Korea Avaratra. Saingy nafana vay tsy misy toy izany ny fandrahonana nataon'ny any Avaratra farany, ary mihazakazaka mampatahotra ny fifanenjanana ao amin'ny renim-paritra Azia Atsinanana tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay.
Niala Ny Praiminisitra, Toy Ny “Sambo Rendrika” I Libanona
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana04 Avrily 2013
@Brigitte_khair: Tahaka ny tovolahy mihiaka ‘hoe “Mandrahona hametra-pialàna indray i #Mikati. Koa raha hametra-pialàna tokoa izy, tsy ho taitra intsony ny olona. Raha nanomboka ny tsaho momba ny fialàny, nihevitra ny sasany fa mivazivazy ny Praiminisitra Libanona Najib Mikati. Satria teo aloha, efa indroa izy no nanambara fa hametra-pialàna. Nametra-pialàna...
Fahafahana Vonjimaika Ho An'ilay Mpanao Gazety Indiana Naveen Soorinje.
Azia Atsimo04 Avrily 2013
Nosamborina tamin'ny 7 Novambra 2012 i Naveen Soorinje, mpanao gazety amin'ny fahitalavitra raha namoaka ilay loza niseho momba ny “fitondra-tena” izay nahavoarohirohy ireo mpikambana ao amin'ny ankavia hindoue Jagaran Vedike ho nana herisetra tamin'ireo tanora lehilahy sy vehivavy ao Mangalore, India. Nahazo fahafahana vonjimaika avy amin'ny Fitsarana Ambony Karnataka ihany anefa izy. Noraisina izany fanapaha-kevitra...
Amerika Latinina Aorian'ny Nahafatesan'i Chávez: Fanovana sy Fanohizana
Amerika Latina04 Avrily 2013
Amin'ny maha-mpitsikera mavitrika an'i Etazonia sy amin'ny maha-mpitarika nampifoha indray ny antoko ankavia azy manerana an'i Amerika Latinina, tsy isalasalana fa namela dia miavaka eo amin'ny politika iraisampirenena iainana amin'izao fotoana i Hugo Chávez Frías. Saingy hanao ahoana kosa ny lova navelany? Raha misaona sy miditra amin'ny fampielezan-kevitra i Venezuela,...